प्रचण्डसँग ओलीको भलाकुसारी, नेपालसँग हेराहेर मात्रै — Imandarmedia.com
प्रचण्डसँग ओलीको भलाकुसारी, नेपालसँग हेराहेर मात्रै
फोटो: नयाँ पत्रिकाबाट
काठमाडौँ। एक–अर्काको अस्तित्व नै नस्विकार्ने तहमा पुगेका ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख नेतालाई कांग्रेस महाधिवेशनले लामो समयपछि एक ठाउँमा जुटाइदिएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग एक वर्षपछि र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग पाँच महिनापछि एकै मञ्चमा भेट भएका हुन्।
नेकपा विभाजनपछि पहिलोपटक भएको भेटमा ओली र प्रचण्डले छोटो प्रत्यक्ष संवाद गरे। ओली र नेपालको भेट भने हेराहेरमै सीमित बन्यो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बीचमा पारेर बायाँतिर ओली र दायाँतिर प्रचण्डको सिट व्यवस्थापन थियो ।
नेपालका लागि दायाँतिरै प्रचण्डपछिको दोस्रो कुर्सी थियो । उद्घाटन सत्र चलिरहँदा देउवा कहिले प्रचण्ड त कहिले ओलीतिर पटक–पटक गफिए । कार्यक्रमको मध्यान्तरपछि ओली–प्रचण्डबीच दुईपटक छोटो संवाद चलेको थियो।
प्रचण्ड सम्बोधन सकाएर पोडियमबाट फर्किँदै गर्दा ओलीतिर फर्किएर मुस्कुराए । ओलीले जवाफी मुस्कानसहित ताली पिटेर प्रचण्डको सम्बोधनमा समर्थन रहेको सन्देश दिए ।
कुर्सीतिर लम्किँदै गर्दा प्रचण्डले बाटैमा ओलीसँग छोटो संवाद गरे, फर्वाडरले मिडफिल्डरको पास नचुकाएझैँ । दुई नेताको यो संवाद चल्दा अध्यक्ष नेपाल भने मन्तव्य सकेर मञ्चबाट बाहिरिसकेका थिए ।
प्रचण्डको सम्बोधनलगत्तै ओलीको सम्बोधन सुरु भयो। प्रचण्डले उनलाई सुने। सम्बोधनको अन्त्यतिर माइक बन्द भएपछि ओली मञ्चतिर फर्किँदै गर्दा प्रचण्ड देउवासँग बिदा हुने तरखरमा लागे।
ओली कुर्सीतिर लम्किँदै गर्दा ‘देउवा’लाई क्रस गरेर प्रचण्डसँग दोस्रोपटक भलाकुसारी गरे । प्रचण्डले कार्यक्रमबाट बिदा हुँदै गर्दा देउवालाई नमस्कार गरे। प्रचण्डलाई ओलीले पनि हात उठाउँदै नमस्कार गरे । लगत्तै प्रचण्डले पनि जवाफमा हात फर्काए।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि पनि कांग्रेसको मञ्च मन माझ्ने थलो बन्यो। उनीहरूबीच पटक–पटक संवाद चल्यो।
ठाकुर र यादवबीच पनि एउटै मञ्चमा पहिलोपटक भेट जुरेको थियो। उनीहरू दुवैजनाका लागि मञ्चको पहिलो लहरमा सँगै बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
लिङ्देनको अभिव्यक्तिप्रति कम्युनिस्ट नेताको एकस्वर: कांग्रेस महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा तीनै कम्युनिस्ट नेताले गणतन्त्र रक्षाको सवालमा आवश्यकता परे एउटै मोर्चामा उभिने प्रस्ट संकेत दिए ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नेताहरूलाई गाउँघरमा जनताले ‘चोर’ भन्न थालेको अभिव्यक्ति दिँदै राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मुद्दा उठाएपछि उनीहरूले प्रतिवाद गरे ।
आज पनि नेपालका नागरिकहरूले नागरिक स्वाभिमान बिर्सने जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त अचम्म लाग्छ । कोही जन्मिँदै शासक जन्मिने निराधार सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघका मान्यताविपरीतका सिद्धान्त, नागरिकबाट कोही नेता बन्न सक्दैन, हरेक नेता चोर हुन्छन् जस्ता कुरा बोकेर हिँड्ने ?’
ओलीले लिङ्देनलाई कटाक्ष गरे, ‘हुन त भर्खर–भर्खर अध्यक्षमा छानिएकाले अलिकति रापताप होला साथीहरूलाई । भर्खर–भर्खरको बाछो अलिकति हिँड्न जान्दैन, अलिकति बढी कुद्छ क्या ! नयाँ–नयाँ सभापति भएको, अलिकति रापताप होला अलि समयमा ठीक आउला भन्ने मलाई लाग्छ ।
लिङ्देनले ‘गाउँघरतिर नेता आएको थाहा पाएपछि जनताले नाम लिने होइन, कुन चोर नेता आएछ भन्न थालेको अवस्था छ, अब राजनीतिलाई लिकमा ल्याउने हो भने राजसंस्था पुनस्र्थापना, पूर्णसमानुपातिक संसद् र सांसदबाट मन्त्री नहुने व्यवस्थामा जाऔँ’ भनेका थिए ।
प्रचण्डले पनि लिङ्देनको मन्तव्य तानाशाही जन्माउने षड्यन्त्रबाट प्रेरित भएको भन्दै प्रतिवाद गरे । ‘एकजना वक्ताले विचार प्रस्तुत गर्ने क्रममा नेताहरू आए भने देशमा, गाउँघरमा जनताले चोर आयो भन्छन्, तपाईंहरूले सुन्नुभयो, यो साँचो हो त ? होइन, गलत हो । यो केका निम्ति भनियो ?’ प्रचण्डले भने,
‘जतिवेला जहाँ लोकतान्त्रिक दल, शान्तिका निम्ति संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई बदनाम गर्न खोजिन्छ, त्यहाँ निरंकुशता, तानाशाही जन्माउने षड्यन्त्र हो भन्ने बुझिन्छ, कहीँ न कहीँ तानाशाही त्यसरी नै आउने गर्छ । त्यसकारण हामी सतर्क हुन जरुरी छ ।’
अध्यक्ष नेपालले नदीको प्रवाहलाई उल्टो दिशामा हिँडाउन खोजे देशभर ज्वालामुखी विस्फोट हुने भन्दै राजतन्त्र फर्काउने सपना नदेख्न चेतावनी दिए । ‘आजको संकेत राम्रो देखिरहेको छैन, नेपालको राजनीतिमा कालो बादल मडारिन खोजिरहेको छ । त्यसकारण सावधान भन्न चाहन्छु ।
प्रतिगामी तत्वहरूलाई भन्न चाहन्छु, फेरि शिर उठाउने दुस्साहस गर्ने काम नगर्नुस्, नदीको प्रवाह अगाडि बढिरहेको छ, त्यो पछाडि जान सक्दैन । नेपालमा राजतन्त्रको कुनै भविष्य छैन, सम्भावना छैन । त्यस्तो दुस्साहस कसैले नगरुन्’,
नेपालले भने, ‘नेपाली जनता फेरि ज्वालामुखीझैँ मेची–महाकालीसम्म विस्फोटका रूपमा अगाडि बढ्नेछन् । बरु राजाले पनि पार्टी खोले हुन्छ, होइन भने व्यापार गरेर बसे हुन्छ । हामीलाई वंशको शासन स्वीकार्य छैन ।’
प्रचण्ड–नेपालको प्रस्ताव– कांग्रेससँग सहकार्य, ओलीको चाहना– एकल प्रतिस्पर्धा: कांग्रेस महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले यसअघिको तुलनामा छोटा मन्तव्य राखे पनि आफ्ना नीतिगत मतभेद र दाउपेच भने छरपष्ट पारे ।
प्रचण्ड र नेपालले कांग्रेससँग गठबन्धन र सहकार्य गर्दा ठूलो उपलब्धि हुने भन्दै चुनावसम्म सँगै जानुपर्ने प्रस्ताव राखे ।‘कहिलेकाहीँ साथीहरू एक्लै हिँड्ने कुरा गर्नुहुन्छ, हामी एक्लै हिँड्ने अहंकार कसैले नगरौँ, मिलेरै हिँड्ने हो । हामीले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरे पनि त्यो प्रतिस्पर्धाभित्र पनि एकता खोजिराख्नैपर्ने हुन्छ ।
अहिले जे सफलता भनेका छौँ, गठबन्धनबाट प्राप्त भएको सफलता हो । ०४६ को सफलता, ०६२ को सफलता, शान्ति सम्झौताको सफलता सबै दलहरूबीचको एकताको परिणााम हो,’ प्रचण्डले भने, ‘त्यसकारण एक्लै हिँड्ने अहंकार देखाउँदा जसले अहंकार गर्‍यो,
त्यसको ओरालो यात्रा सुरु भयो भन्ने राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ । उनले देशलाई एकताबद्ध गर्ने, गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने कुरामा महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्वको फैसला गर्न सुझाए ।
तर, ओलीले भने कांग्रेस अरूको दाउपेचको सिकार हुन सक्ने चेतावनी दिए । उनले चुनावी प्रतिस्पर्धाबाहेक राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको मुद्दामा एमाले पनि सँगसँगै हुने भन्दै साना पार्टीको स्वार्थको रोटी सेकाउने झिनामसिना कुरामा नअल्झिन कांग्रेसलाई सुझाए ।
‘केही साना दलहरूलाई कांग्रेसले औँला समाउन दिएन भने के होला भन्ने पिर छ । सधैँ सुन्छु, सँगै जानुपर्छ, सँगै जानुपर्छ । सँगै जाने भनेको सरकारमा मात्र हो कि, देश बनाउन हो ?’ ओलीले भने, ‘देश बनाउन सँगै जाने कुरामा नेकपा एमाले कांग्रेसको साथमै छ, हामी सरकारमा छैनौँ, प्रतिपक्षमा छौँ ।
प्रतिपक्ष भनेको के संसद्को अंग होइन ? लोकतन्त्रको सवालमा के साथमा छैनौँ ? हामी सँगै लडेका छैनौँ ? त्यसकारण सरकारबाट हट्न पर्ला कि भन्ने कतिपयलाई चिन्ता होला । नेकपा एमाले एक्लै हिँड्ने रहर पनि गर्दैन ।’
ओलीले कांग्रेसलाई अरूको नीतिका पछि कुद्नभन्दा पनि देशकै नेता बन्ने गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिए । ‘हामी राष्ट्र निर्माणका क्रममा एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेस सबैलाई साथ लिएर चलोस्, तर कांग्रेस अरूका नीतिका पछाडि होइन,
आफ्नो नीतिमा अरूलाई पनि हिँडाओस् । यस महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेस, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री मात्र होइन, सरकारको नेता हुनुस् भन्ने मेरो शुभकामना छ,’ ओलीले भने ।
अध्यक्ष नेपालले गणतन्त्र प्रमुख दलहरू मिलेर ल्याएको भन्दै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । तर, त्यसका लागि लोकतान्त्रिक चरित्र हुनुपर्ने भन्दै घुमाउरो तरिकाले ओलीलाई व्यंग्य गरे ।
‘राजनीतिमा धेरै विकृति छन्, पार्टीभित्र, राज्यसत्ताभित्र । ती विकृतिहरूलाई हामीले पन्छाउनुपर्छ । विकृतिका बाहकहरूले फैलाइरहने, हामी टुलुटुलु हेरिरहने स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
मैमत्ता गर्ने विकृतिबाट, लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई कुल्चिने प्रवृत्तिबाट अरूको सम्मान नगर्ने प्रवृत्तिबाट, मर्यादा नराख्ने प्रवृत्तिबाट त्यस हुनाले साँचो अर्थमा लोकतन्त्र चाहन्छौँ भने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता आत्मसात् गर्नुपर्छ,’ नेपालले भने । नेपालको सम्बोधन सुनेर ओली भने पटक–पटक मुसुमुसु हाँसेका थिए ।
कांग्रेसको मञ्चमा थप पाँच पार्टी : संविधान संशोधन र राष्ट्रियताको मुद्दा: कांग्रेस महाधिवेशनको शुभकामना दिँदै जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेस आन्दोलनको माग पूरा गर्न नागरिकतालगायतका मुद्दा सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने आवाज उठाए ।
उनीहरूले माग पूरा नभए चुनावी मुद्दाका लागि आफ्ना पार्टीहरू आन्दोलनमा जान सक्नेसमेत संकेत गरे । मधेस आन्दोलनका उपलब्धि सम्बोधन गर्न अविलम्ब संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । नागरिकता समस्या समाधान गर्नुपर्छ, विगतका सम्झौता पूरा गर्न ढिला गर्नुहुन्न ।
मधेसी, खस–आर्य सबै जातिको राष्ट्रिय पहिचान सुरक्षित गर्नुपर्छ,’ यादवले भने । ठाकुरले पनि उस्तै शैलीमा माग मात्र उठाएनन्, माग पूरा गर्न सडकमा आन्दोलन चर्काउन बाध्य हुने चेतावनी नै दिए । संविधानप्रतिको हाम्रो असन्तुष्टि कायमै छ । हाम्रा कोही नेता जेलमा छन्, कोही तारेखमा ।
भारी मतले विजय प्राप्त रेशम चौधरी जेलमा हुनुहुन्छ, सर्र्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ,’ ठाकुरले भने, ‘अब पनि हाम्रा माग पूरा भएनन् भने ज्वालामुखी विस्फोट हुन्छ, सडकमा उत्रिन बाध्य हुन्छौँ । अरू दलका नेताहरूले भने राष्ट्रियता कमजोर अवस्थामा पुगेकाले सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले राष्ट्रियता संकटमा परेको र ००७ सालदेखिको आन्तरिक राजनीतिमाथिको वैदेशिक हस्तक्षेप उस्तै रहेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट भएर बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
राष्ट्रिय जनर्मोचाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन र प्रतिगमनको अवरोध रोक्न अहिलेको गठबन्धनलाई अझ मजबुत बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन्। श्रोत: नयाँ पत्रिका